Toos, Dagaalyahan - WEBTOON LACAG LA'AAN
Toos, Dagaalyahan Celceliska 4 / 5 ka mid ah 2
N / A, waxay leedahay 2.6K views
Waxaan noqday ka-faa'iideystayaasha dagaalyahannada…? Maalin maalmaha ka mid ah, shantii geesiyaal ee halyeeyada ayaa ka soo muuqday barxada hore. Daawooyinka aan sameeyay aniga oo aan fakarin ayaa shaqeeyay ?! Dhab ahaantii? Waan necbahay badbaadinta nolosha, laakiin waxaan ku waayey rabitaankii oran lahaa maya. Aynu ula dhaqanno sida ugu dhaqsaha badan oo aan u sii dayno. Si kastaba ha noqotee, jawiga ku hareereysan dagaalyahannada ayaa aad u yaab badnaa. “Marwo Kacana, qof halkan jooga oo adiga keligaa kuu diri maayo. ”“ Maxaad u kululeyn weyday? Waxa ugu muhiimsan waa jirkaaga. ” "Maxaad u qarinaysaa sirahaas badan, Kacana?" "Ma jeceshahay carafkayga wax badan?" Waxaan ahay xoogaa hurdo sariirta ku jiifa. 'Si kadis ah uma hogaaminayo, miyaa?'
Cutubka 34 February 22, 2021
Cutubka 33 February 21, 2021
Cutubka 32 February 9, 2021
Cutubka 31 February 2, 2021
Casharka 29aad Qaybtii 1aad Dhamaad January 29, 2021
Cutubka 26 January 29, 2021
Cutubka 25 December 22, 2020
Cutubka 24 December 15, 2020
Cutubka 23 December 15, 2020
Cutubka 21 December 15, 2020
Cutubka 20 December 15, 2020
Cutubka 19 December 15, 2020
Cutubka 18 December 15, 2020
Cutubka 17 December 15, 2020
Cutubka 16 December 15, 2020
Cutubka 15 December 15, 2020
Cutubka 13 December 15, 2020
Cutubka 12 December 15, 2020
Cutubka 11 December 15, 2020
Cutubka 8 December 15, 2020
Cutubka 7 September 4, 2020
Cutubka 1 Waxaa laga yaabaa 24, 2020
100 Maalmood oo aan kugu jeclaado
My Vampire Sayidow